Abuu Mansuur Roobow Ali ayaa ka war bixiyey qaabkii ay u fashilmeen Shabaab kuna soo koobay 3 qodob oo kaliya.
Posted by admin on August 11 2011 21:56:05
Somalia(HS)- Hogaamiyaha labaad ee ururkii fashilmay ee Shabaab Abuu Mansuur Roobow Ali ayaa sheegay in fashilka Ururka ay ugu wacneyd sedax qodob,maxaadse kala socotaa qaabkii uu ugula baxay ciidankii ka joogay Hiiraan kedib bur burkii kooxda?halka kooxaha dagaalka ka wada Mogdisho ay ka soo jeedaan labo beelood wararka maanta
Somalia:- Ururweynahii Shabaab ee waxii ka horeeyey dhimashadii Osama Bin Landen garab iyo gaashaan ka dhiganayey ajaanib wadamadooda soo gubay kedib markii ay qandaraas la soo galeen shaqsiyaad ka soo jeedo Somaliland oo aanu ka xusi karno Ahmed Godane ayaa sida muuqata si fiican u bur buray kedib markii ay soo baxayaan maalinba maalinta ka danbeysa sirtooda ramiga ah.
Abuu Mansuur Roobow Ali oo aad ula yaaban sida ay mudo gaaban wax isku bedeleen ciidmadiisiina kala soo baxay degaano badan oo ku taalo koofurta Somaliya oo ay caasimada ugu horeyso ayaa qiray in bur burkii Shabaab ay sabab u aheyd sedax qodob oo kaliya.
Waxuu yiri Shabaab waxey u qeybsaneyd sedax koxood intii aan ogeyna hada ha ogaato intii ogeydna waaba ogtahay.
1- Waxuu yiri qeybta koowaad waa ajaanib wata lacago badan waana kuwa shacabka sida arxan darada ah ula dhaqmay xitaa wey ku dhiiran kareen iney hooyadaa kugu hor xoogaan maadama aqliga kaliya ee ay aaminsanaayeen uu ahaa dhaqaalo sidaasina shacab badan oo Somaliyeed ay ku la'deen.
2- Kooxda labaad ayuu ku sheegay kuwo siweyn ugu xirnaa Ahmed Godane iyo oday Daahir Aweys oo gadaal kaka soo biiray Shabaab kuna shaqeyn jiray qaab qabiil halka raga ka soo jeeda degaanda waqooyi ku sheegay kuwo ujeedadoodu aheyd oo kaliya sidii ay koofurta Somaliya shacabkeeda loo dhibaateyn lahaa iyadoo la meel marinayo fikirka ajaaniibta aaminsan iney dhaqaalo oo kaliya waxkasta ku maareyn karaan.
3- Kooxda sedaxaad ayuu ku shegay kuwo jahwareersan oo intooda badan ku nool Sh/dhexe iyo Hiiraan maadama aysan maamulka guud aysan ku laheyn hogaamiyaal waaweyn iyagu waa kuwa maanta dhibaatada ugu badan ay heysato ayuu yiri ,waayo ayuu yiri dadkoodii ayaa cadow looga dhigay mana garanayan ilaa maanta meel ay aadan waxeyna ku qasban yahiin ilaa ay iyaga dhabarka iska tooganayaan amaba daadku ku imaanayo iney ku dagaal galaan magaca bur buray ee Shabaab.
Marka laga soo tago bur burka Shabaab ayuu Abuu Mansuur qaab layaab leh ugala soo baxay ciidamo kaka sugnaa Hiiraan isagoo ugu baaqay ineysan hal mar soo bixin oo ay hubk waaweyn u dhiibtaan ganacsato ka soo jeeda Bay iyo Bakool oo waadan danbe hanti ku yeeshay Hiiraan kedibna iyagoo caadi ah koox koox u soo raacaan baabuurta xamuulka.
Sida muuqata Abuu Mansuur waa ninka kaliya ee Shabaab ka tashaday dhinac kasta hadey noqon laheyd mid ciidan, dhaqale iyo waliba isagoo dadka degaanka Bay iyo Bakool gaarsiiyey in isagoo isticmalayo magaca Shabaab ay wiilal ka yimid Bay iyo bakool ku xakumaan Belet Weyn iyo Jowhar shacabka degaanadaasi ka soo jeeda.
Hadaba waxaa isweydiin leh Abuu Mansuur Ma danbiilaa mise waa nin ka faa'ideystay shaqaaqadii wadanka ka dhacday mudadii ay joogeen Shabaab amaba xooganaayeen? xaqiiqadii Abuu Mansuur waxuu danbiile noqon lahaa hadii uu maanta xabsi ku jiri lahaa Shiikh Shariif waayo isagoo 5000 oo dhalinyaro ah salfday xiligii uu ahaa hogaamiyahii maxkamadaha kuwaasi oo ku dhintay Moode Moode iyo Daynuunaay caruur laga soo qafaalay schoolada Mogdisho na galiyey dagaal ayuu ugu danbeyn noqday madaxweyne oo maanta Villada ka arimiyaa marka sidee ayey danbiile ku nonqon doonaan mustaqbalka Ahmed Godane iyo Abuu Mansuur?
Su'aashaas jawaabteeda aqristayaasha ayan u deynay.
Dhinaca kale warar horudhac ah oo laga helayo magaalada Mogdisho ayaa sheegaya dhalinyarada markii ay Shabaab ka baxeen Mogdisho kedib walito dagaalka ka wada Mogdisho iney ka soo jeedaan Jifooyinka Ceyr oo HabarGidir ah iyo Warsengeli Abgaal oo ka tirsan beelweynta Abgaal. labadan Jifo dagaalka ay ku jiraan waxey u arkan mid xaq ah maadama midna gacantooda laga bixiyey Sh/hoose midna ay gacantooda ka baxday Dekedii Ceel Macaan oo aan sidii hore loo isticmaalin. waxeyna inta badan saaxiibaan marka uu soo dhaw yahay wanaag iyo nabad ka curata Mogdisho iyo nawaaxigeeda maadama ay soo mareen xili ay dhaqaalaha koofurta Somaliya ay gacantooda ku jirtay sanadahii tagay waxii ka horeeyey soo galitaankii ciidmada Ethiopia soo galeen Mogdisho iyo guud ahaa koofurta Somaliya.
Waxeysa su'aal ka taagan tahay masuuliyada u sheganayo Shiikh Shariif iyo rag la mid ah ee aan reerahooda ka socneyn sida ay uga shaqeyn karto dalka intiisa kale, maadama iskaba daa Somalida ku nool koofurta oo dhan inuu gaarsiiyo maamulka uu hor boodayee qabiilka uu ka soo jeedo ay hada marayaan ilaa 5 maamul goboleed halka ay caasimadii Soamliya isagoo ku magacaaban xil Soamliyeed ay rabshado ka wadaan. meesha ma ruwaayad ayaa ka socota qaranimo kama muuqatee?
Walee dhib waxuu imaanayaa marka shir wadatashi ah lagu qabto magaalo dadkeedu sidaa yahiin raga siyaasiyiinta isku sheegayana ay dadkooda wax ka dhaadhicin karin halka ay isku mashuulinayaan umado kale oo ka fog iney hagardaameeyaan oo ay xumaantooda ku mashquulaan.